Wednesday, December 12th, 2018 - 11:32:45
0 Visits: 420 | Saturday October 24, 2015 - 20:10:51
Bayern oo la heshiisay Ancelotti
0 Sunday October 18, 2015 - 08:22:46
Bayern ayaa la sheegayaa in ay heshiis shaqsi ah la gaartay Macallinkii hore ee Kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti.
Taageereyaasha Bayern Munich oo ka biyo diidsan qiimaha tikidhada garoonka Arsenal. Masoo xadiri doonaan?
0 Saturday October 17, 2015 - 11:42:38
(Kubadbile) - Jamaahiirta Bayern Munich ayaa ugu baaqay saaxibaddood in aysan daawan shanta daqiiqo ee ugu horeeysay kulanka Champions League ee ay Emirates kula dheeli doonaan Arsenal sababo la xiriira Tikidhadda qiimehoodda oo sare loo qaaday.
Breitner: Bayern ha siiso Go'aanka Mustaqbalkiisa Guardiola
0 Thursday October 15, 2015 - 09:06:49
Kooxda Bayern Munich Tababaraheeda ayuu heshiiskiisu ku egyahay Xagaagan, balse kooxda ayaa ka codsatay in uu la sii joogo.
Muller oo Qosol Jees-jees ah ugu dhuftay Man Utd, keddib Dalabkeedii ku wajahnaa isaga!
0 Wednesday October 14, 2015 - 16:53:47
Germany weeraryahankeeda Thomas Muller ayaa aad u qoslay keddib Louis van Gaal oo isku deyay in uu isaga ka wado Bayern Munich Geeyana Manchester United.